Mayelana Nathi - Toptag Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen TopTag Technology Co., Ltd yasungulwa ngo-2008 inamahhovisi amabili amakhulu atholakala eHong Kong naseShenzhen, eChina.I-TopTag yasungulwa iqembu labantu abashisekayo nabanobuhlakani abanolwazi olucebile lwe-RFID yokuhweba nokwenza.
I-TopTag igxile kumathegi namalebula e-RFID ahlukahlukene anomumo nezinto ezisetshenziswayo.Amathegi ethu asukela emazingeni aphansi kuya ku-Ultra-high frequency, asetshenziswa kabanzi ku-NFC Field, Inkokhelo Yeselula, Ukulawulwa Kokufinyelela, ukuphathwa kwe-supply chain, ukuphathwa kwe-inventory, ukugcinwa nokuphathwa kwempahla, ukuphathwa kwemfuyo njalonjalo.Siphinde sibe nemigqa ekhethekile yemikhiqizo yokuvinjwa kwe-RFID ehlanganisa umnikazi wekhadi lokuvimbela i-RFID, amakhadi okuvimbela i-RFID, izikhwama zokuvimbela amasignali njll.
I-TopTag ayibandakanyi i-R&D kuphela, ukukhiqiza, ukuthengisa kodwa futhi inikeza isevisi yokubonisana nobuchwepheshe nokusekelwa.Isevisi eyenziwe ngendlela oyifisayo iyatholakala ukuze amakhasimende ethu enze omaki bawo ngokwezifiso namalebula ngokuya ngomsebenzi, ukwakheka nokokusebenza.
Amandla Ethu Abalulekile
Singakwazi ukwenza amathegi angokwezifiso ngendlela evumelana nezimo kakhulu, nokuklama, noma yibuphi ubuningi nanoma yimuphi usayizi.
Imigqa Eyi-5 Yochwepheshe yokuqinisekisa Ikhwalithi Ephezulu, Ikhono Elikhulu kanye nesikhathi sokuhola esifushane kakhulu.
Sebenzisa ngokugcwele izinzuzo zamafekthri ahlukene ukuze unikeze umkhiqizo ongcono kakhulu ngentengo enhle kakhulu.
Ukwesekwa kochwepheshe kanye nethimba labadayisi elisebenza kahle kakhulu.
Impumelelo yamakhasimende impumelelo yethu, ngaleyo ndlela isevisi yamakhasimende engcono kakhulu.